Soomaaliya oo ku gacan seyrtay go’aan ay dalalka carabta ka qaateen muranka Masar iyo Itoobiya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Soomaaliya oo ku gacan seyrtay go’aan ay dalalka carabta ka qaateen muranka Masar iyo Itoobiya
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay inay labada dalba saaxiib la yihiin laakiin ay eegayaan danaha gaarka ah ee darisnimada.
Image captionAxmed Ciise Cawad
Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa socday wadahadallo saddex geesood ah oo lagu doonayay in Masar iyo Itoobiya looga dhex dhaliyo heshiis ku aaddan arrinta ay isku hayaan.
Masar ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay in biyaha lagu buuxinayo biyo xireenka ay Itoobiya sameysaneyso uu saameyn ku yeelan doono xaddigii biyaha ee ay ka heli jirtay wabigaas, maadaama uu yahay isha kaliya ee ay ka aroorato.
Laakiin Itoobiya ayaa ku adkeysaneysa in ay si deg deg ah u hirgaliso mashruucaas, oo la filayo inuu noqdo biyo xireenka laga dhalin doono quwadda korontada ee ugu weyn qaaradda Afrika.
Dhawaan ayuu burburay dadaal waanwaan ah oo uu Mareykanku ka dhex waday labada dal. Suudaan oo uu wabiga sii maro ka hor inta uusan Itoobiya ku dhammaanin ayaa sidoo kale qeyb ka ahayd wadaxaajoodka.
Image captionMadaxweyne Trump ayaa Aqalka Cad kula kulmay ergo ka socota waddamada Masar, Itoobiya iyo Sudan
Walaaca Masar ayaa xoogeystay kaddib markii ay Qaramada Midoobay sheegtay in sida uu biyo xireenka ku socdo ay Masar ku keeni karto in ay soo wajahdo biyo yari, sannadka 2025.
Masar waxay dooddeeda ugu weyn ku saleysan tahay in la dheereeyo waqtiga la buuxinayo biyo xireenka, si aysan biyo la’aan usoo food saarin, halka Itoobiya ay dooneyso in dhowr sano gudahood lagu dhameystiro buuxinta biyo xireenka.
Qaar ka mid ah dadka sida dhow ula socda arrintan waxay aaminsan yihiin in dowladda Masar aysan jirin waddo kale oo u bannaan oo aan ka ahayn inay qaado tallaabo milateri oo xaaladda uga sii dari karta, waana taas sababta ay labada dal u doorbideen in arrintan lagu dhameeyo qaab diblomaasi.
Lama saadaalin karo tallaabada kale ee xigi karta go’aanka kasoo baxay jaamacadda Carabta, iyadoo Itoobiya ay xoogga saareyso in buuxinta biyo xireenka la dhammeystiro sanadka soo socda.
Soomaaliya oo ku gacan seyrtay go’aan ay dalalka carabta ka qaateen muranka Masar iyo Itoobiya was last modified: June 25th, 2020 by Admin